Umdlavuza Webele Cell Growth okuhlanganisiwe by Kwamathambo Drug - Izindaba Rule
A Isivivinyo in amagundane luye lwabonisa ukuthi denosumab izidakamizwa abe yokuvimbela wamabele yokwelapha abantu abanomdlavuza kwabesifazane nge BRCA1 zofuzo
Lesi sihloko osesikhundleni “umdlavuza webele cell ukukhula okumisiwe by kwamathambo izidakamizwa, Ukutadisha imibukiso” lalotshwa Ian Isampula Science umhleli, The Guardian ngoMsombuluko 20th June 2016 15.40 UTC
Abesifazane abakhipha ingozi aphakeme abantu abanomdlavuza webele kanjalo bangase bazuze umuthi isivele enqunyiwe ukuba aphathe kwamathambo umuntu eguga, ngokososayensi e-Australia.
Abacwaningi bathola ukuthi laba izidakamizwa kwamathambo, denosumab, ungamisa ukukhula lamaseli zisenza ebeleni izimila in nabesifazane abazenzo ingozi yesifo mkhulu ngenxa yokwanda koshintsho in isakhi esibizwa BRCA1.
Nakuba othembisayo, umsebenzi ngendlela efanele usaqala kanye nemiphumela wakhothoza kangaka lab ukuhlolwa amagundane wamabele izicubu kumele yakhiqizwa ekulingweni womuntu ezinkulu ngaphambi izidakamizwa angabhekwa njengendlela yokwelapha yokuvimbela.
Healthy BRCA1 futhi BRCA2 zezakhi zofuzo asize DNA umzimba ukukhanda ezilimele. Kodwa lapho kungaba isakhi esithile sisebenza soguquko lwegciwane singalawuleka, ingozi webele futhi wesibeletho umdlavuza ungakheka basukume zisuka emoyeni ziqonde. Cishe ingxenye yabantu besifazane abangoFakazi ifa kuguquka abayingozi BRCA1 noma BRCA2 ngeke nomdlavuza webele lapho lineminyaka 70.
Abesifazane abathola Zithwala eziyingozi BRCA ukuguquka kwezakhi zofuzo kungabangela baya ukuhlinzwa zokungenelela kungakonakali kanjalo nokuvimbela ukususa izifuba zazo, noma ube ngaphezulu ukuhlolwa okunzulu izimila. "Sasiphakathi nesithakazelo ekutholeni inketho alternation, a non-kuhlinzwa yokwelashwa laba besifazane,"Kusho Emma Nolan eWalter futhi Eliza Hall Isikhungo Medical Research in Victoria.
Related: Study amaphuzu ababebheka ngayo ukwelapha ngaphandle ngezifiso umdlavuza wamabele
Ososayensi sahlaziya webele izicubu ezinikelwe abafowethu owesifazane ethola ukuthi unesifo BRCA1 ukuguquka kwezakhi zofuzo. kule, azihlobene iqembu abahlukene amangqamuzana yavuleka futhi kubonakala sengathi omandluleli webele izimila.
Ukuhlolwa okwengeziwe kwemibhalo amangqamuzana lwembula ukuthi wathwala marker amaprotheni on the surface, esibizwa RANK1. I amaprotheni esifanayo ihlushwa denosumab, okuyinto vele isetshenziswa ukwelapha kwamathambo futhi nomdlavuza okuyinto liye lasakazekela ithambo.
In lab izivivinyo kubika iphephabhuku Nature Medicine, denosumab ivinjiwe ekukhuleni amangqamuzana omdlavuza eyandulela kanye behlisa ukukhula izimila in amagundane ezifuywa nomdlavuza webele.
"Sijabula kakhulu le miphumela ngoba kusho sithole icebo ingasiza ukuvimbela umdlavuza wamabele ngo eliphezulu kakhulu ingozi abesifazane, Ikakhulukazi BRCA1 kuguquka abathwali,"Kusho Geoff Lindeman, a oncologist yezokwelapha eRoyal Melbourne Hospital. Uthe zesivivinyo sasemtholampilo ukuze bahlole izidakamizwa iziguli usuqalile kakade.
Emma Smith at Cancer Research UK wathi: "Insights singene amangqamuzana abangela isimila ukukhula besifazane nge okuyiphutha BRCA1 zezakhi zofuzo kungase kuholele ekusebenziseni zokwelapha ezintsha ekunciphiseni ingozi yokuba nesifo somdlavuza webele, enikeza laba besifazane ongakwenza ukwehlisa ingozi yabo. Kodwa lokhu kuhlolwa kwenziwa ngo amagundane kanye on amangqamuzana lab, ngakho asazi kanjani ngempumelelo le ndlela kungaba ukunciphisa nomdlavuza ingozi kubantu besifazane, noma kanjani okungaqhathaniswa ongakhetha tekuvikela atholakala kakade. "
47851	11 Isigaba, Biology, umdlavuza webele, Ufuzo, Health, Ian Sample, kwesigaba Main, Abacwaningi bezokwelapha bazishaya, Izindaba, umdlavuza wesibeletho, Isayensi, Society, The Guardian, UK Izindaba, UK news, UK Science
← OnePlus 3 Buyekeza Bose QC35 Wireless headphone ukubuyekeza →